"Satria efa nohamarinina tamin’ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika."Romana 5:1
“Fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra; tsy avy amin’ny asa, fandrao hisy hirehareha” (Efesiana 2:8-9).
Nanazava izany teny izany ity evanjelista iray. Amin’ny alalan’ny finoana irery ihany no nampihavanana antsika tamin’Andriamanitra, ary fanomezana avy aminy izany. Hoy izy hoe ny famonjena antsika dia tsy azo noho ny asa, tsy azo noho ny fahamendrehana, tsy azo vidìm-bola. Nisy mpihaino iray, resy lahatra fa ilaina ny asa mba hahazoana famonjena, nitanisa andinin-tSoratra Masina iray hafa ao amin’ny Baiboly: “Hitanareo fa hamarinina amin’ny asa ny olona, fa tsy amin’ny finoana ihany” (Jakoba 2:24). Mifanohitra ve izany?
Ny Baiboly dia Tenin’Andriamanitra, ary ny Fanahy Masina no Mpanoratra azy. Tsy mba misy mifanohitra izay lazain’Andriamanitra. Ireo andininy roa ireo dia manambara fomba fijery roa samihafa ary mifameno, dia izay hitan’Andriamanitra, sy izay mety ho hitan’ny olombelona.
Andriamanitra dia mahay mamaky izay ao anaty saina sy fo. Fantany raha hoe miankina amin’ny asan’i Kristy irery ihany ny mpino, mba ho voavonjy. Raha izay, dia “hamarinina” eo anatrehan’Andriamanitra izy. Ny finoana dia fahatokiana an’Andriamanitra, fa tsy fanekena foto-pampianarana fotsiny.
Ho an’ny olombelona, izay tsy mahita afa-tsy ny vokatra ivelany entin’ny fiovana anaty, dia ny asa no ahafahana mahita ny finoana. Ny asa ataon’ny kristiana dia mifanaraka amin’izay maha izy azy ao anatiny. Ny fiainany andavanandro dia mampiseho ny finoany. Samy zava-dehibe na ny asany na ny finoany. Voalohany, ny finoana, mba handraisana ny fanomezana atolotr’Andriamanitra ; ary avy eo ny asa, izay vokatry ny aina avy amin’Andriamanitra.